25 Common Windows 10 Dhibaatooyinka iyo sida loo dayactir | Caseguru
5 3 Shumacyada
#1 Windows 10 Shuruudaha System
Tani waa ka badan oo ku cel, laakiin waxaa muhiim ah in la ogaado haddii aad rabto in laga hortago arimaha aan loo baahnayn ku dul rakibo. Your computer u baahan yahay inuu kor u dhigma nidaamka qaarkood. Halkan Details ee Microsoft waxay u baahan tahay:
Processor A ee 1 gigahertz (gHZ) ama si dhakhso ah
1 gigabyte (GB) (32-waxoogaa) ama 2 GB (64-waxoogaa) RAM
16 GB oo ah meel disk adag oo lacag la'aan ah
Microsoft DirectX 9 sawiro qalab iyadoo malag hoggaamin WDDM
A account Microsoft iyo helitaanka Internet
#2 Windows 10 ma soo bixi doonaan
Windows 10 ma soo bixi doonaan
Users qaba Windows 7, 8 ama 8.1 ayaa la rejeynayaa inay noqon download Windows awoodin 10 si toos ah adigoo gujinaya icon la dallacsiiyo in saxaarad nidaamka on Taskbar. Si kastaba ha ahaatee, dadka isticmaala qaar ka mid ah ayaa lahaa dhibaato download ah, ama aan la oggol yahay in weli download it (Microsoft waxaa la isku soo qaseyn sida dayactirka si tartiib tartiib ah si Internet uusan jebin).
Xaaladaha intooda badan, dhibaatada la kulantay sababtoo ah edition aad hadda ee Windows aan si buuxda updated, iyo ordaya Windows Update furfuraya dhibaatada.
In ka baaqan, waxa aad ka shaqeyn kartaa dhibaatada adigoo isticmaalaya Microsoft ee Windows 10 warbaahinta download qalab. Waxaa soo bixi doona file .ISO ee nidaamka qalliinka ah, taas oo la raran karo drive USB ama DVD ah si markaa loo soo dajiyo nidaamka qalliinka ka xoq.
#3 Windows 10 Arrimaha laawayaasha
Windows 10 Arrimaha laawayaasha
Waxaa macquul ah dhibaatada ugu muhiimsan ee isticmaala ayaa sheegay in maalmaha hore ee Windows 10 waa waxa ugu adag ee ku teedsan Xeebaha software ka dib marka la rakibo. Waa ay adag tahay in la qiyaaso arin ka aasaasi ah ka badan, oo si dabiici ah taas oo ku hogaamisay in qaar ka mid ah jawaabaha halkii INGARIISKA: bog Internet ka badan maalinta ugu dambaysa ama si.
Si kastaba ha ahaatee, niyad inkastoo arrimo ay hawshooda xagga Eebeyna u yihiin, in ay dhacdo Windows 10 waxaa suurtagal ah si ay u xaliyaan xad aan xanuun lahayn. Illeen, Microsoft ayaa si cad u sheegay in arrimaha la xiriira hawshooda waa in dhab ahaantii isu xaliyo dhawr daqiiqadood gudahood. Tani waxa ay guud ahaan ayaa lagu sheegay inay kiiska ka mid ah Windows 10 bulshada, laakiin dadka isticmaala qaar ka mid ah dhibaatooyinka ahaatee khibrad waarta leeyihiin. Waxaa jiri doona markasta caadi ahaanshaha la sii daayo software ah dhibka ah, In kastoo, iyo xagga Eebeyna u waddo talinayaa kuwa la kulma dhibaatadan fudud yahay si loo soo dajiyo oo isku day mar kale.
Dad badan ayaa muujiyay walaac ku saabsan siyaasadda update cusub Microsoft ee. Updates in Windows 10 waa khasab ah, sidaa darteed ma waxaad dooran kartaa ka mid ah duuban oo iyaga ku rakibidda. Taasi waa macnaheedu aad leedahay software deggan iyadoo ugu dambeeyay jaamaha ammaanka iyo la rajeenayo, laakiin mararka qaarkood waxa ay u keentaa dhibaatooyin. Waxaan soo arkay khaladaad iyo shilalka sababa khilaafka u dhexeeya Windows Update iyo darawalka ugu dambeeyay ee Nvidia, inkasta oo arrintan ayaa loo dheereeyaa. Cayayaanka kisiga dhuumalaysi ah iyada oo loo marayo imtixaan Microsoft ee waa lama huraan.
Haddii aad u jiheysan this Microsoft page taageero waxaad ka heli doontaa fariimaha u uninstalling darawal ah oo aan la rabin ama update. Waxa kale oo aad ka heli doontaa ah "Show ama qarin updates" xirmo troubleshooter. Waxaa Download, furna, tuubada Qari updates, ka dibna hubi updates ku aadan rabin in si toos ah loo soo dajiyo. Waxaad mar walba ku noqon karto in ay mar dambe loo hormariyo Tus updates qarsoon ka dibna uncheck wax aad go'aansaday ha aad rabto in aad rakibto ka dib oo dhan.
Waxa aad isticmaali karta brannmur ah si loo joojiyo adeeg update ah oo looga hortago in la xariirta si toos ah. Dhibaatada ay leedahay waa in Microsoft waxay leedahay siyaasad jaray helaan updates mustaqbalka haddii aad aqbali updates in iyada oo loo marayo yimaadaan hal bil gudahood. Access waxaa lagu soo celin doonaa haddii aad mar dambe aqbali updates aad ka xanibeen, sidaa daraadeed waxa uu weli waxay noqon kartaa hab lagu iibsan markii qaar ka mid ah si aad u ogaato sida ay deggan update yahay.
#5 Windows 10 Dhibaatooyin Sound
Windows 10 Dhibaatooyin Sound
Haddii aad qabto dhibaatooyin la rakibo wadaha Realtek ah, ma heli waayo-aragnimo buuxda audio la VIA HD Audio, ama dhibaato ku Conexant audio, waxaa jira workaround ah si aad isugu daydo.
Aan eegno, kuwaas oo saddex arrimood si cagsi ah. Dhibaato la Conexant audio ka dhigan tahay waxaa laga yaabaa in aad maqashaan codka lahayn in Windows 10 inkastoo wax walba muuqataa in si sax ah ka shaqeeya. Iyada oo ay tani la baarayo, Microsoft soo jeedinaya in ordaya msconfig.exe kuna sii jeeday dalka tab Boot ah. Guji button ka Advanced fursadaha, calaamadee sanduuqa xasuusta ugu badan oo dhigay qiimaha inay 3072.
Haddii aad qabto VIA HD Audio oo ay helaan in aad kaliya ku maqli karaa codka ka Chine gaar ah, waxaa jira kala duwan ah workaround aad u. Open Radidiyaha Qalabka, xaq guji qalabka wax soo saarka audio oo u qotomiyey sidii qalab default ah. Iyada oo waxan sameeyey, doortaan qalabka, hit Guryaha, guuraan tab uqaadineed iyo hubi Disable oo dhan doorasho uqaadineed.
Ugu dambeyntii, haddii aad la ciirsan yihiin dhibaato Realtek rakibo ah darawal audio — gaar ahaan qalad ah 0x000005b4 — waxaad isku dayi kartaa workaround la daabacay ee Stone Library Support. Waxaa jira tuse in la isticmaalayo Group Policy Editor in la siiyo darawalka dheer si loo soo dajiyo, ama aad kala soo bixi kartaa file diiwaanka ku qortid goobaha cusub ee la laba qasabno. Marka taasi la sameeyo, aad ka dibna dib-u-deyi kartaa in la rakibo darawalka.
#6 Windows 10 updates qasbay sababta nidaamka shil
Dhibaatada kale ee ay keento ku updates qasabka ah waa in ay burburi karaan your computer.
Rebooting your computer xaliyo waa in kiis by case saleysan. Waxaad sidoo kale uninstall karaa darawalka in uu keeno dhibaatooyin.
#7 Windows 10 Arrimaha Chrome
Windows 10 Arrimaha Chrome
Users badan ayaa sidoo kale warbixinta dhibaatooyin hore la Chrome browser. Inkastoo Microsoft ayaa isku dayay inuu repackage dadaalka Browsing Internet gaar ah la sii daayo browser Edge ah, tani weli waa news xagga Eebeyna u xun uu xusay inay. Chrome helay badan oo caan la qoon gaystay dadka isticmaala Internet, oo waxay khusaysaa nooc ka mid ah dadka kuwaas oo si dabiici ah ayay u badan tahay in ay ku adopters hore ee nidaamka Windows ka hawlgala.
Nasiib darro, badan oo dadka isticmaala browser Chrome haysato huuri dhan ah dhibaatooyinka, la bogging iyo slowdowns ee software-ka loo arkaa gaar ahaan ku baahday. Waxa ay u muuqataa in u downloaders qaar ka mid ah browser Chrome ah, hawlaha processor-degdeg ah sida video si fudud aan ka hawlgala, sida ay tahay in ay.
Hubaal waxa tani ay noqon doonto arrin in Microsoft shaqeeya waqti ka, laakiin workaround hore arrimaha wax Chrome soo maray waa in ay dilaan oo dhan kororsi la xiriira browser ah. Sida dhammaan dhibaatooyinka la xidhiidha Windows 10, soo jeedin ah ee uninstalling iyo reinstalling Chrome ayaa sidoo kale ka mid caan ah, iyo farsamo ah oo fudud oo kaa caawin kara yareeyo dhibaatooyinka wax.
#8 Windows 10 updates qasbay keeni dagaallo software
Windows 10 updates qasbay keeni dagaallo software
Warka ugu khasabka ah waa ay fog dhinaca trickiest ee Windows 10. Weli dhibaato kale oo dhici kara waa marka update Windows ah ay ku beegan tahay update software maamulka darawalka dhinac saddexaad ah. Tani waxay keeni kartaa shil. The software xisbiga saddexaad la hakiyey karo, laakiin update Windows aysan heli karin.
Sharad aad ugu fiican yahay Windows maamulka darawalka xisbiga saddexaad uninstall iyo daynin is ogow of dhan updates nidaamka, oo siisa awood Microsoft waxyaabaha shirkadda kale ee.
#9 Windows 10 Baaba ugu cadcad
Windows 10 Baaba ugu cadcad
Internet Explorer ayaa ka mid ahaa xubnihii ugu caayeen of software adduunka, iyo Microsoft ahaa badan waajib-ku xidhay si ay u cusboonaysiiyaan si degdeg ah halkii ay ka dib. Waxaa la yaab ma laha markaas in uu sii daayay cusub ah Edge browser, iyo wax ka qabashada hore ee barnaamijka waa in ay si weyn u la soo hagaagtay ka badan ay dhaceen, Internet Explorer.
Si kastaba ha ahaatee, dadka isticmaala qaar ka mid ah ayaa dhibaatooyin ay joogaan ay liiska kooxaha ugu cadcad soo maray, oo ay ahayd in la soo guuray in ka badan si toos ah uga jira Bookmarks Internet Explorer. Si kastaba ha ahaatee, xaaladaha inta ugu badan tan fudud waa arin aqoonsi ah. Si aad u heshaan ugu cadcad on Edge, waa si fudud loo baahan yahay in la furo menu ka dibna riix 'Settings ". Hoos si 'ugu cadcad Import’ ka browser kale, dooran browser in markii hore looga faa'iideysan, iyo ugu dambeyntii ku dhufo "Import '. Tani waa xal u helidda dhibaatada isla.
#10 Windows 10 Cortana aan shaqayn
Windows 10 Cortana aan shaqayn
Windows Qaar ka mid ah 10 users ayaa dhibaato ku heli Cortana in ay ka shaqeeyaan. Dadka qaar waxa ay qaadan farriimo in Cortana aan la heli karin in ay gobolka ama luqad, inkastoo ay gobolka ku taageeray oo la isticmaalayo luqad taageeray. Qaar kale ayaa laga helay Cortana ma aha on by default, ama aan si fiican u shaqeeya.
First of dhan, ka dhacay Start > Cortana > Qorka oo aad toggle karaa Cortana on iyo off.
Eeg in Settings > Waqtiga & luqadda. Waxaad u baahan tahay si aad u hubiso in aad isticmaalayso mid ah luuqadahan - Chinese (Fududeeyay), English (U.K.), English (Maraykanka), Faransiiska, Talyaani, Jarmal, iyo Spanish, iyo in aad pack luqadda hadalka waxa lagu xiraa. Waxaad sidoo kale u baahan tahay in aad dalka ama gobolka ay u noqon Shiinaha, France, Germany, Italy, Spain, United Kingdom, ama Mareykanka.
#11 Windows 10 OneDrive placeholders martay
Windows 10 OneDrive placeholders martay
Microsoft ayaa sida ay adeegga gurmad daruurtii bedelay, OneDrive, ka shaqeeya Windows 10. Dad badan ayaa jira oo lur si aad u ogaato in placeholders, kuwaasi oo ay asal ahaan xiisaha faylasha gaar ah lagu kaydiyaa daruurtii, ayaa laga saaray. Tusayey, waxaas la sameeyey, maxaa yeelay, dadka qaar ku dawakheen placeholders iyo fikiray ay faylasha ay ku kaydsan degaanka. Nidaamka waxaa haatan ku salaysan nidaamka xulashada, taas oo aan la wanaagsanaa dadkii oo qaar ka mid ah oo jeclaa in ay awoodaan in nidaamka faylasha gaar ah, gaar ahaan marka ka shaqeeya qalabka la meel lagu kaydiyo xadidan.
Dhex mara browser web oo heli faylasha shaqsi aad rabto.
Waxaad ku khariidada karin sida drive ee sahamisa file. Log in si OneDrive on biraawsarkaaga guji Faylal markaas nuqul ka tiro CID- (ayaa odhan doona CID = raaceen tiro baar cinwaanka). Tusaale ahaan tan Aynu niraahno waxa sheegay CID = 435rty. Open File Explorer, waxaad tagtaa PC Tani, oo guji Drive network Map, dooran warqad, ka dibna ku dhaji in "https://d.docs.live.net/435rty". Halkee 435rty waa lambarka CID. Reconnect at calaamad-in waa in la hubiyaa. Waxaad u baahan tahay inay la soo wareegto in, laakiin markaas waxaad u yeelan doontaa in ay helaan aad OneDrive marayo File Explorer, laakiin waxaa digay - waa qayb la'ahay.
Fiiro : Tani weli waa shaqo ah ee horumarka, sidaa darteed haddii ay adiga muhiim kuu ah, u sheeg kooxda OneDrive ku saabsan. Waxaad samayn kartaa talooyin ee Website OneDrive. Waxay dib ugu soo dejiyo placeholders ama ka duwan oo ka mid ah update mustaqbalka.
#12 Windows 10 Folder ku guuldareysato
daaqadaha 10 folder guuldareystaan
Qaar ka mid ah hore Windows 10 users ayaa soo jeediyay in Windows 8 waa ka xoogbadan, nidaamka cusub ee hawlgalka ka mid ah la xiriira. Codsiga email in ayaa lagu soo daray Windows 10 xilligan ma ogolaan dadka isticmaala si ay u abuuraan subfolders markii abaabulka email jira. Iyadoo la fiirsaday laga yaabaa in wax ka mid ah arrin caadi by users badan, hadda waxaa jira xal u lahayn in ay cabashadan.
#13 Windows 10 Arrinta Mail
Dad badan oo aan previewed Windows 10 ayaa sheegaya in Mail Windows laga heli karaa version 8.1 xoogbadanyahay. Tani waa sababta aad abuuri kartaa fayl iyo subfolders, adiga oo aan la app Mail ee Windows samayn karaa 10 (ugu yaraan sida ee hadda). Dadka raba inay wax badan ka email Iyada isticmaalayso halkii Thunderbird, oo si fiican u la shaqeeya Windows 10.
#14 Windows 10 arrinta xad-dhaaf ah isticmaalka bandwidth
Windows 10 arrinta xad-dhaaf ah isticmaalka bandwidth
In Windows 10 Feature Optimisation Update Delivery in la karti by default. Dhibaatada waxa ay tahay in ka shaqeynayaan taasi si toos ah u adeegsanayaa kombiyuutarada martida yahay iyo bandwidth internet gudahood ay u gudbiyaan updates in kale Windows 10 Users PC
Windows 10 users dooran kartaa in aad gacanta u noqon-off muujinta ah, oon ku sii haysashada bandwidth weyn ee hawlaha muhiimka ah. Si aad barkinta Windows Update Bixinta Optimisation, Raac tallaabooyinka hoose:
Tallaabada 1: Settings Open
Tallaabada 2: Dul tag qaybta Windows Update
Tallaabada 3: Dooro Advanced
Tallaabada 4: Dooro Dooro sida updates waxaa lagu bixiyay doorashada
Tallaabada 5: Calan toggle in Off
Ka dib markii ay ku rakibidda Windows 10, users waa in aad aragto in ka Microsoft Hel updates, oo heli updates ka iyo diri updates in ay qarka u saaran yahay by default in kumbiyuutarada on my network deegaanka, iyo kumbiyuutarada internet-ka.
Microsoft ayaa sheegtay in Windows Update feature Bixinta Customisation ma aha qasab in la hakiyo-dhaadhici doonaa xiriir internet PC marti ah, laakiin isticmaali doonaa bandwidth kaliya xadidan.
#15 Windows 10 Arrimaha xiriiriyaan
Windows 10 Arrimaha xiriiriyaan
Windows Qaar ka mid ah 10 Isticmaalayaasha ayaa sidoo kale ka cabanaya in Wi-Fi la goynta si joogto ah. Tani ma aha wax aan caadi ahayn la nidaamka qalliinka ah ama mashiinka, laakiin in ay dhacdo Windows ah 10 waxa jiray dhibaatooyin la reconnection. Tani si dhab ah ma aha arrin gaar ah aan caadi ahayn ee guud ahaan versions badan ee Windows, iyo in la diyaariyo waxaa si fudud u baahan reboot fudud. Tani waxa ay ahayd arrin markii hore la Windows 7 iyo Windows 8, oo waa wax ay tahay in lagu xalin in fashion si caddaalad ah oo toos ah.
Waxa kale oo la soo jeediyey qaar ka mid ah adopters hore ee Windows 10 in curyaamo Wi-Fi qaybsiga awood u xirnaanta wireless in ay si weyn u badan oo xasiloon noqon. Workaround Tani ma la si rasmi ah loo xaqiijin ay Microsoft, laakiin haddii Wi-Fi muuqataa in ay tahay arrin markaas curyaamo qaybsiga ee Windows 10 waxay noqon kartaa arin muddo-gaaban.
#16 Windows 10 Wi-Fi deganayn, gaabis ah, ama ma xiri doona
Windows 10 Wi-Fi deganayn, gaabis ah, ama ma xiri doona
Dad badan oo Windows 10 users ayaa sheegtay in arrimaha la Wi-Fi. Dadka qaarkood waxa ay si gaabis ah ama si googo'an dhibciyo xiriir, kuwo kale ay dhibaato ku heli Wi-Fi in at dhan shaqeeyaan.
Bilow keydi si aad u router iyo your computer off iyo on mar kale.
Haddii aadan heli karin Wi-Fi in at dhan shaqeeyaan ka dibna laga yaabo in aad qabto dhibaato darawal ah. Ka hubi saaraha adabtarada network iyo in la hubiyo in aad qabto darawalka ugu dambeeyey. Waxaad laga yaabaa in download it on computer kale oo ku xidh via USB flash drive.
Hubi in aad router wuxuu sidoo kale leeyahay sistemkaaga ugu dambeeyey. Waxaad ku heli kartaa bogga internetka ee soo saaraha ee.
Tag Settings > Network & Internet > Wi-Fi. Hubi in ka Isku si toos ah sanduuqa la hubiyaa shabakad aad rabto in ay ku xidhmaan.
Tag Settings > Network & Internet > Wi-Fi > Maamul goobaha Wi-Fi > Maamul shabakadaha yaqaan oo aad ku doorato network, ka dibna riix Ha illoobin. Reboot mishiinka iyo geli faahfaahinta shabakadda in ay ku xidhmaan cusub.
#17 Windows 10 qaybsada aad Wi-Fi la xiriiro
Windows 10 qaybsada aad Wi-Fi la xiriiro
Waxaa jira had iyo jeer dheelitirnaan in la helay muddadii u dhexaysay raaxadeeda iyo ammaanka, laakiin dadka qaar waxay dareemaan Microsoft ayaa tallaabsaday soohdin la feature cusub Wi-Fi Dareenka. Fikradda asaasiga ahi waa in ay bixisaa hab fudud oo toos ah si ay u wadaagaan sirta Wi-Fi (si buuxda lo) xiriirka la nuugo ee ka Outlook, Skype, ama Facebook. Dhibaatada waxa ay tahay waxaa laga yaabaa in aad rabin in ay oggolaadaan in la gaaro in aad shabakadda Wi-Fi in mid kasta oo ka mid ah Facebook "saaxiibada".
Tag Settings > Network & Internet > Wi-Fi > Maamul goobaha Wi-Fi oo aad toggle karaan shabakad la wadaago off, ama ay doortaan in ay ka mid Outlook, Skype, ama Facebook.
Waxa kale oo aad go'aan ka gaari kara haddii in ay ku xidhmaan shabakadaha la wadaago xiriirada aad halkan, kaas oo muhiim ah, maxaa yeelay,, sida Microsoft ayaa sheegay in, "Xusuusnow, dhammaan shabakadaha Wi-Fi ma tahay amaan. "
Haddii aad welwel ku saabsan tahay shabakad shirkad, ama qof kale ee aad network ma uu doortay ka soo baxay, ka dibna waxa kale oo aad ku dari kartaa qoraalka "_optout" si ay magacaaga network (SSID), laakiin Microsoft ayaa sheegtay in ay qaadan kartaa dhowr maalmood si aad u network in lagu daro liiska go'aansaday-ka maqnaan Wi-Fi Dareenka.
#18 Windows 10 Bluetooth aan shaqayn
Windows 10 Bluetooth aan shaqayn
Windows garoomo dhowr ah 10 users haysato dhibaato Bluetooth fiican u shaqeeyaan. Tani waxay saamayn kartaa keyboard, mouse, headphones, iyo wax kale oo isku xira in aad computer via Bluetooth.
Tag Settings > Qalabka iyo in la hubiyo in Bluetooth waxaa toggled on.
Hubi in aad siyaada Bluetooth waxaa si buuxda u soo eedeeyay iyo in aad soo socda habka qabiirada. Mararka qaarkood waxaad u leedahay in hoos u qaban badhan si ay u sameeyaan qalabka discoverable. Ka hubi saaraha wixii faahfaahin ah.
Waxaa jira fursad macquul ah in tani ay tahay dhibaato darawal ah. Waxaad u baahan tihiin inaad ka hubi saaraha in aad qabto darawalka ugu dambeeyey, gaar ahaan haddii aad si toos ah u boodaya ka Windows 7 si ay u 10.
Dhowr qof ayaa la sheegay in uninstalling darawalka u ah qalab aad dhalna la, rebooting aad mashiinka, ka dibna daynin Microsoft si toos ah waxaa lagu ogaan iyo rakibi darawalka ku filnaan doonto.
#19 Windows 10 Printer ka jawaabaynin
Windows 10 Printer ka jawaabaynin
Haddii, ka dib markii lagu casriyeeyo, aad dareentid in aad printer aan shaqayn, waxaa laga yaabaa inaad u bilowdo hawsha rakibaadda dhammu.
Si loo hubiyo isku xirnaanta aan xuduud lahayn, wax walba, xataa wadayaasha ah hardware socda, waa in la cusboonaysiiyaa ka hor in dayactir kooban. U hubso in aad isticmaalayso printer ah in ay la socon Windows 10.
#20 Windows 10 ma furi kartid Windows Store ama aan ka soo dejisan kartaa barnaamijyadooda
Windows 10 ma furi kartid Windows Store ama aan ka soo dejisan kartaa barnaamijyadooda
Waxay u muuqataa in dad badan waxaa la socda dhibaatooyin la Windows Store ka dib markii la xariirta in Windows 10. Dadka qaarkood ma furi doono oo dhan, kuwa kale waxa caddaynaya aan suurtagal ahayn in si dhab download barnaamijyadooda ama app updates. Waxaa jira fursad ah in dib app downloads iyo updates waa natiijo ka mid ah server mashquul, laakiin waxaa jira waxyaabo qaar waxaad isku dayi kartaa:
Press Windows + R ka dibna ku qor exe in sanduuqa iyo saxaafadda Ku qor. Haddii aan markaas shaqeeyaan tirtirto aad download saf oo mar kale isku day. Dadka qaar waxay sheegaan shaqeeyay iyaga u ah ka dib markii isku day yar.
Haddii aadan heli karin Windows dukaanka oo dhan waxaa laga yaabaa in aad leedahay maxaa yeelay go'an ee gobolka qaldan. Tag Settings > Waqtiga & luqadda oo aad hubiso in aad qarka u saaran inuu dalka aad dhab ahaantii ku tahay.
Waxaa kale oo qiimo leh in la hubiyo in aan hoos u yahay in goobaha waqti aan sax ahayn. Eeg in Settings > Waqtiga & luqadda oo hubiyo in dhammaan xaq u muuqataa.
#21 Windows 10 Edge ma sii qulquli doonaan music markii la yareeyo
Windows 10 Edge ma sii qulquli doonaan music markii la yareeyo
Sababtoo ah Edge waa app dadkoo, ficilladooda ay ganaax ku maqan marka ay la yareeyo. Tani waa run ahaantii wax aad looga xumaado marka aad ka hoorto music ku yaal.
Waxaa jira arin aan lahayn waayo, kanu, si aad si fudud u leeyihiin in ay sii qulquli aad music meel kale, haddii aad qorshaynaysid in aad Dhagaysta halka isticmaalaya qalab aad u qabto hawlo kale.
#22 Windows 10 Touchscreen adag
Windows 10 Touchscreen adag
Qaar ka mid ah dadka isticmaala Windows previewing 10 on qalabka ay mobile ayaa sheegaya in awoodaha touchscreen ma aha sida intuitively functional sida in ay ahaadaan. Tusaale ahaan, waa ay fududahay inuu seego cidhifka suuqa kala ah marka la isku dayayo in u jiidi, iyo qaar ka mid ah astaanta ay yihiin wax aad u yar inay haleelaan la qoyaan farta.
Nasiib darro, taasu waa qumman tahay nooca bahalka. Run ahaantii waxaa jira ma ahan wax badan oo aan ka ahayn dhaqanka caawin doona in aad dhibaatadaas ka gudubto finicky.
#23 Windows 10 Dhibsado pop-up
Windows 10 Dhibsado pop-up
Ugu dambeyntii, bulshada isticmaala warbaahinta ayaa sheegay in marka ay isku dayayaan in ay ku rakibi Windows 10 in ay uu aqrinayo fariin gaar ahaan diiqayo. Furmo suuqa pop-up Tani waxay bixisaa qaar ka mid ah talo ah ugu yaraan waxtar leh in shirkad kasta oo software abid la bixiyaa mid ka mid ah dadka isticmaala ay. Suuqa ayaa su'aal fudud in "Wax ku dhacay", ka dibna ku daraa ra'yiga adigoo sheegaya in ay “Wax u dhaceen – Microsoft – Wax ku dhacay. "
Dabcan waxa uu la kulmay farxad badan oo meme-abuurka on warbaahinta bulshada, laakiin iyadoo ay jiraan muran iyo dheeldheel in dad badan ayaa ka soo jeeda baadi this, ku dhaqanka ma aha run ahaantii dhibaato weyn. Circumnavigating arrintan si fudud waa arrin ah uninstalling iyo reinstalling software, iyo in intooda badan ka turjimaysa kiisaska ayaa soo noq-jirin taasi fariin qireen dhibsado.
#24 Windows 10 updates qasbay abuuro portal u junkware
Windows 10 updates qasbay abuuro portal u junkware
Windows 10 ma users siin doorasho marka ay timaado updates nidaamka. Waxaa si toos ah iyaga oo aqbalay. On hal gacan tani waxay ka caawisaa computer warwareegaan ay ganacsi ee la xariirta sida. Waxa kale oo ay hubisaa in computer kor u yahay in taariikhda on jaamaha ammaanka, laakiin warsiinta si toos ah awood u Microsoft in gebi ahaanba wax kasta oo ay doonayso quudi Ciidanka gal PC ah user ama qalab mobile.
Waxaa runtii arin ma ay in this, haddii aad fuulaysid Windows 10 Enterprise, Microsoft ee xal ganacsiga oggolaanaysa in dadka isticmaala ogolaan ama diidi updates.
#25 Windows 10 aan mar dambe oo lacag la'aan ah
Windows 10 aan mar dambe oo lacag la'aan ah
Tani ma aha wax badan dhibaato sida ay digniin u tur. Windows 10 laga heli doonaa sida hagaajinta lacag la'aan ah, laakiin kaliya muddo hal sano ah. Ka dib markii in retails u $119.
Sannad ka dareemeysaa waqti dheer, laakiin adduunka ee technology waa bilig bilig ah isha, sidaa darteed ha saarin tan kor saaray mid aad u dheer … kaliya dheer oo ku filan si ay u ha u laalaab hore aad xalliyay.
daaqadaha Windows 10 Post PreviousSamsung Galaxy ee Next casriga ah waxaa lagu dhawaaqi doonaa 13-ka AugustPost Next Caseguru Products inaad u jeclaataa, Sidoo kale waxaa la heli doonaa on Amazon.com! Related Posts
15 Dhibaatooyinka la Edge Samsung Galaxy qod6 / qod6 – Sidee inuu dayactirka ku dhameeyo
Laayeen Galaxy qod6 Iron Man Limited Edition – Rasmi Unboxing
iPhone 6 Bedelaada Screen lagu sameeyey 5 daqiiqo
Samsung Galaxy S3 Glass Screen Bedelaada Repair Change
Magaca Hore	E-Mail Address
Talooyin iyo Casharrada